मेरो धर्म के हो ? | Diyopost - ओझेलको खबर मेरो धर्म के हो ? | Diyopost - ओझेलको खबर
बिहिबार, भाद्र ३१, २०७८ | २२:१७:५४
नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल एउटा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेखिएको भएतापनि समय समयमा हिन्दु धर्मको लागि जनमत संग्रह गरिनु पर्छ भन्ने आवाजहरु यदाकदा सुनिने गरिन्छ । एउटै देशभित्र रहेका हरेक मानिसहरुका स्वेच्छाले जुनसुकै धर्म मान्न पाउने अवसर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रको एउटा मात्रै धर्म हुनुपर्छ भन्नु कतिको न्यायोचित होला भन्ने मानिसहरुका मनमा लाग्नु स्वभाविकै हो । तर हाम्रो देशमा त्यस्ता विचारको घरिघरि किन जन्म हुन्छन् होला भनेर मलाई कौतुहल लागिरहने गर्दछ ।
२०४० साल माघ महिनाको कुरो हो । म तिनताका १८ वर्षको ठेटना थिएँ । ओठमा जुङ्गाको रेखी बस्ता नबस्तै बेलायती गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनको लागि धरानमा अवस्थित घोपा क्याम्पमा पुगेको थिएँ । सैनिकमा भर्ती भइसकेपछि फाराम भर्ने क्रममा गुरुबाबुले मेरो आधिकारिक नाम र वतन सोधे । त्यसपछि उनले केही सोध्दै नसोधी धर्मको महलमा थपक्कै ‘हिन्दु धर्म’ भनेर लेखिदिए ।
गुरुबाबुले मेरो धर्म हिन्दु लेख्दै गरेको मैले त्यसबेला पर्खालको भित्तामा उभिएर निरिह तरिकाले नियालिरहेको थिएँ । तर भर्खरभर्खरै सैनिकमा भर्ती भएको हुनाले उनको सामुन्ने एक्कै शब्द ओकल्न सकेको थिइनँ । हुनत त्यसबेलासम्म मेरो बुद्धिको पूर्ण विकास पनि भइसकेको थिएन । अझै ग्रामीण भेगबाट भर्खरै सहरमा झरेको एकजना किराँतीको बच्चा भएपनि चराको बचेराझैँ अति निर्दोष थिएँ । झन् सबैभन्दा मुख्य कुरो त हामी किराँतीहरु उपाध्याय ब्राम्हणहरुलेझैँ गाउँको हरेक घरघरमा गएर जजमान गर्न पर्दैनथ्यो । त्यसैले हामीले खास्सै पढन जरुरी छैन है भन्ने ब्रम्हाज्ञानलाई राम्ररी शिरोधार्य गरेको थियाैँ । तर त्यति बिघ्न पढ्ने अवसर नपाए पनि मलाई त्यसबेला ‘के म हिन्दु धर्मावलम्वी नै हुँ’ भन्ने प्रश्नले भित्री हृदयमा फलामे तीरले झैँ कताकता घोचिरहेको आभास भइरहेको थियो ।
धर्मको परिभाषालाई एकछिन थाँती राखेर बरु बेलायती सैनिकमा भर्ती भएर हङकङमा पुगेको क्षण स्मरण गर्न चाहन्छु । हङकङमा पुगेको केही वर्षपछि एकदिन पाइ ताउ गाउँ, सातिनमा पुगेको थिएँ । जहाँ सन् १९५१ मा बुद्धको एउटा ठूलो विहार निर्माण भएको थियो । जुन विहारको नाम दश हजार (टेन थाउजेन्ड) बुद्ध भनेर राखिएको छ । तर त्यस विहारको नाम १० हजार भएतापनि त्यहाँ १३ हजार बुद्धका प्रतिमाहरु रहेको भन्ने सुनिन्छ । आखिर त्यहाँ पुगेर बुद्धका त्यति धेरै प्रतिमाहरु गनेर चाल पाउने समय सायदै कस्लाई पो मिल्न सक्ला र ? तैपनि १३ हजार प्रतिमा राखेर त्यसको नाम चाहिँ दश हजार भनेर किन राखिएको होला भनेर म मनमनै छक्क पर्ने गर्दथेँ ।
खैर जे सुकै होस्, मेरो त्यस टहरोदेखि ढुङ्गा फाल्ने हो भने पनि भगवान श्री पशुपतिनाथको शिरमा रहेको सुनको गजुरमा मात्र नभएर शिवलिङ्गमाथि पानीको धारा चुहाउने झन् ठूलो १०८ किलोको सुनको जलहरीसम्म पुग्न सक्छ । तैपनि मेरो त्यति सुक्ष्म टहरोबाट आँखा मिच्दैमिच्दै एकाबिहानै उठेर मन्दिर प्रवेशद्वारको सीधै अगाडि पुगेपछि, ‘हिन्दुहरुको लागि मात्र प्रवेश’ भन्ने थोत्रो परिचयपाटी देख्दा म झसङ्गै झस्कने गर्दछु । किनभने ‘के म हिन्दु नै हुँ त ? त्यसैले के मभित्र जान मिल्छ र ?’ मेरो दिमागभरि त्यस्ता अनेकन प्रश्नहरु नाचिरहने गर्दछन् ।
आखिर भगवानको विषयमा जस्ले जेसुकै भनेतापनि मेरो विचारमा जिजस निश्चय पनि निख्खुर श्वेत वा अश्वेत नभएर कि त यहुदी वा प्यालेस्टाइन अर्बहरुको सन्तान हुनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा लागिरह्यो । किनभने तिनताका इजरायलमा ती दुवै थरिका मानिसहरु मात्र त्यहाँ बसोबास गर्दथे भन्ने इतिहासबाट पुष्टि हुन्छ । हुनत इतिहास जित्नेहरुले लेख्छन् । त्यसैले त्यति धेरै विश्वास गरिहाल्ने आधार हुँदैन । तसर्थ हामी सबैले उनको विश्वास गरिहाले पनि उनको उत्कृष्ट १२ चेलाहरुमध्ये जुडाज इसकारियटले त उनलाई पटक्कै विश्वास गरेका थिएनन् र रोमन प्रहरीहरुलाई जिजस चिन्नको लागि आँखाले संकेत गरिदिएका थिए ।
इजरायलमा पुगेर यहुदी, मुश्लिम र क्रिश्चियन त्रिधर्म सम्बन्धी चाहे जतिको ज्ञान हासिल गरेपछि म दुबइतिर हुइकिएँ । दुबइमा पुगेर विश्वको एक मात्र सात तारे होटल बर्ज अल अरबको २७सौं तलामा अवस्थित अल मुन्ताह रेष्टुराँमा मध्यान्हको भोजन लिँदै गर्दा शेख जायद मस्कको विषयमा अरेबियन सागरको आकर्षक दृश्यसँगसँगै अध्ययन गर्दै थिएँ । जब मैले त्यस मस्जिद सम्बन्धीको अध्ययन सकेर आबुधाबी पुगेँ तर दुर्भाग्यवस त्यसदिन शुक्रबारको दिन परेको थियो । त्यतिका धेरै मेरो अध्ययनले एकरति पनि काम गर्न नसकेपछि म जाबो फुच्चे के अध्यनशील रहेछु भन्ने महसुस भयो । किनभने त्यहाँ शुक्रबारको दिन गैरमुश्लिमहरुलाई मस्जिदमा प्रवेश गर्न पूर्णतय निषेध लगाइने रहेछ ।
आबुधाबी मस्जिदको बिछट्टै रमाइलो यात्रापछि म अर्को वर्ष साइप्रस पुगिसकेको थिएँ । हुनत त्यो भन्दा अगावै साइप्रसलाई पटकपटक ५ चोटी टेकिसकेको हुनाले त्यस टापुको ग्रीक मात्र नभएर टर्किस क्षेत्रको पनि शिरदेखि पुच्छारसम्म राम्रै ज्ञान आर्जन गरिसकेको थिएँ । तर त्यसपटक लिमासोल पुगेर एउटा पानीजहाजलाई समाते र टर्कीको आलन्य, मार्मरिस, खुसादाशी हुँदै ५ दिन पछि इस्तानबुल पुगेँ ।
इस्तानबुल पुगेपछी नेपोलियनको भन्दा मेरो विचार अलिक फरक भएको थियो किनभने त्यस सहरमा ३१ सयभन्दा अझै बढी मस्जिदहरु रहेका छन् भन्ने मैले त्यहाँ पुगेर जानकारी पाएँ । अब त्यतिका धेरै मस्जिदहरु भएको सहरलाई अन्य केही नभनेर ‘मस्जिदहरुको सहर’ भन्न मन लागिरहेको थियो । कृष्णसागरदेखि बोस्फोरस जलसंयोजन हुँदै आएको मन्दमन्द बतासले मेरो मलिन अनुहारमा स्पर्श गर्दैगर्दा म हाजिय सोफिया मस्जिदमा पुगिसकेको थिएँ । जसकाे निर्माण ५३७ मा भएको थियो । त्यसको निर्माण हुँदा क्रिश्चियन क्याथेड्रल बनेको थियो तर कालान्तरमा ओट्टोमान साम्राज्यले मस्जिदमा परिणत गरिदिएका थिए । आखिर भगवानको नाममा मानवीय नियम जस्तो बनाएपनि हुनेरहेछ भन्ने मैले त्यो सुनेर चाल पाएँ ।
इस्तानबुल अथवा पूर्व कन्सटानटिनोपोल पूर्व एशिया र पश्चिम युरोपको भेट हुने टर्कीको सबैभन्दा ठूलो सहर हो । यो सहर धर्तीको बीच भागमा रहेको हुनाले नेपोलियन बोनापार्टको घर कोर्शिका टापु पुग्दा उनले भनेको “विश्व एउटा देश हुनुपर्छ र इस्तानबुल यसकाे राजधानी हुनुपर्छ” सुनेको थिएँ । उनको भनाइलाई त्यसबेला इस्तानबुलमा पुगेर झल्यास्स सम्झें । तर यो सहर नै बीचमा पर्छ वा चीन बीचमा पर्छ त्यो त मानिसले हेर्ने नजरमा भर पर्ने गर्दछ । किनभने चिनियाँहरुले उनीहरुको भाषामा चीनलाई धर्तीको बीचौबीच भागमा पर्छ भनेर ‘चुङ्वो’ भन्ने गरेका छन् । तर जे सुकै होस् भाषाको विषयमा अर्को लेख आउँदैछ र यो लेख धर्मसँग सम्बन्धित भएकोले त्यतैतिर मोड्न चाहन्छु ।